Home Wararka Doorashadii Itoobiya ee dib loo dhigay oo maanta ka dhaceysa dalkaas
Doorashadii Itoobiya ee dib loo dhigay oo maanta ka dhaceysa dalkaas
Shacabka Itoobiya ayaa maanta u dareeray doorashada baarlamaaniga ah markii horay dib loo dhigay. Doorashadan ayaa ahayd in ay dhacdo sanadkii hore ku yimid dib u dhac sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Doorashadan ayaa ka dhacaysa inta badan dowlad-deegaannada dalkaasi marka laga reebo dowladda deegaanka Soomaalida, gobolka Tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qeybo kale oo dalkaasi ka mid ah. Codbixiyeyaasha Itoobiya ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta, iyagoo dooran doona 547 xildhibaan.
Dhanka kale doorashadan ayaa ah tii ugu horeysay tan iyo intii uu xukunka qabtey ra’iisal wasaare Abiy Axmed sanadkii 2018-kii,ayaa ku soo beegmeysa xilli dowladda uu hogaamiyo Abiy Axmed ay wajahayso cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee Tigray iyo musiibada baniaadanimo ee dagaalku keenay.